ခက်ခဲ နက်နဲလှစွာသော…ကဗျာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » ခက်ခဲ နက်နဲလှစွာသော…ကဗျာ…	13
Posted by Thint Aye Yeik on Jul 4, 2016 in Arts & Humanities, Creative Writing, My Dear Diary, Poetry | 13 comments
ကိုယ့် စိတ်ထဲမှာ ကဗျာအတွေး စာအတွေးတွေနဲ့ တဝေဝေ….
တစ်ခုခု မြင်/တွေ့/ကြား/သိ တာနဲ့တင်…ကဗျာ စပ်ပြီး ချရေးချင်နေတော့တာပဲကွယ်…။
ကိုယ့် သွေးကြောထဲမှာ စီးနေတဲ့ ကဗျာပိုးတွေ…ထကြွသောင်းကျန်းလာပြီထင်ရဲ့….။
ကိုယ်တွေးမိသမျှထဲက တချို့အတွေးတွေကို ကဗျာအဖြစ် ချရေးမယ်ဆိုပြီး…
ဒီအတွေးကို ကဗျာစပ်လိုက်လို့ကတော့ကွာ….ဆိုပြီး အတွေးထဲမှာ တွေးမိ/တေးမိတာတွေမှ အများကြီး…
တကယ့်တကယ်ကြီး ချရေးမယ်ပြင်တော့…ဘယ်က စရေးလို့ ရေးရမယ်မသိ…။
အတွေးတွေကပဲ…တစ်ဖျပ်ဖျပ် ဖြစ်/တည်/ပျက် ကုန်တာလား…
ဖျတ်ခနဲ ဖျတ်ခနဲ ဖြစ်/တည်/ပျက်သွားတဲ့ အဲ့ဒီအတွေးတွေနောက်ကို
သိမှုအာရုံက လိုက်ပါပြီး- မဖမ်းဆုပ်နိုင်လို့လား…
.ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို စိတ်မှာမှတ်
ကာရန်နဲ့နဘေကိုပေါင်း၊ ပေါင်းလို့ရတာကို ဖတ်လို့ကောင်းအောင် ချရေး…ဆိုတဲ့ ပုံသေနည်းတွေကို မသုံးချင်ရေးချ မသုံးချင်…
အဲဒီနည်းတွေကို ဒဏ္ဍာရီထဲမှာ ထားခဲ့ပါရစေတော့…ဆိုတဲ့ ခံယူချက် ရှိသူတွေဟာ…
ဒီလိုနဲ့ပဲ… လွတ်လပ်လိုသော အနုပညာ(ကျိန်စာ)သင့်သူတို့ဟာ…
စိတ်ရဲ့ အတွင်းဆုံးအပိုင်းထဲထိ…နက်ရှိုင်းစွာ တိုးဝင်ရင်း…
ဖမ်းဆုပ်မိသမျှ…ရေးဖို့ကို ဘာသာစကားဆိုတဲ့ မဟာတံတိုင်း နံရံကြီးက ကာဆီး တားသမျှ…ခံရပြန်ရော…
.မြောက်ဘက်စွန်းဆီမှ လာသော တည်တည်တံ့တံ့လေလှိုင်းတို့ ဝူးဝူးဝါးဝါး ပြောနေတဲ့စကား…
.ပြင်းပြင်းထန်ခြင်းနှင့် တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ…. နူးညံ့ငြင်သာ…
အဲသည်အခိုက်အတန့်ကလေးရဲ့ ဖြစ်တည်မှုထဲ… ပန်းတွေထဲမှာ အဖြုစင်ဆုံးဖြစ်ဖူးတဲ့ စံပယ်…
သူ့အပွင့်တို့ကို အပင်ထက်မှာ ချန်ထားရစ်ခဲ့ပြီး…
.ဝေ့ကာဝိုက်ကာနဲ့… မြေပြင်ကို သက်ဆင်းလာတဲ့ စံပယ်ရွက်စိမ်းမြမြ…
သူ …မြေပြင်ကို ကြွေကျသွားပုံက သိပ်လှတယ်။
ဒါပေမယ့် … သူ့အကိုင်းအခက်..သူ့အပွင့်အဖူးတွေကို ခွဲခွါထားရစ်…
ဝါအံ့မူးမူး မြေသားရိုင်းရိုင်းပေါ်မှာ… သွေးရူးသွေးတန်းမဟုတ်ပေမဲ့ သွေးရူးသွေးတန်း….
သူ… လဲလျောင်း ငြိမ်သက်…
ဒါ…သင်္ခါရပဲ…စံပယ်ရုံရေ….တဲ့… ။
သင်္ခါရတို့ သင်္ကေတပြထားတဲ့ညမှာ…
ကျနော် … ကဗျာရေးချင်တယ်…။
ကျနော် ချစ်သော ကဗျာ….
ကျိန်စာသင့်သလို မူးမိုက်တုန်ရီစွာ နစ်ဝင် တွယ်ကပ်နေသော… ကျနော့်နှလုံးသားထဲမှ ကဗျာ…
အဲဒီကဗျာထဲမှာမှ… ကျနော့်နှလုံးသားကလည်း စူးစိုက်နစ်ဝင်လို့….
ကဗျာနဲ့ ကျနော်ဟာ..ဘယ်သူက မြှားလဲ…
ဘယ်သူက ပစ်လွှတ်သူဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘယ်သူက အပစ်ခံသူ ဖြစ်နေခဲ့သည်ဆိုတာတွေက… ကျနော်နဲ့ကဗျာကြားမှာ… အရေးမပါတော့… ။
ကျနော်က… ကဗျာ့ရာဇဝင်ကို ရေးမိတာလား…
ကဗျာက ကျနော့် ရာဇဝင်ကို ရေးမှာလား…
မသိခင်မှာပဲ… ကျနော်… ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေးလိုက်ပါတော့တယ်။
ကျနော် ရေးတဲ့ကဗျာမှာ… ခေါင်းစဉ် ရှိစရာ မလို…
.ရေးသူနေရာမှာလည်း… ကျနော့် လက်မှတ်မလို…
ကဗျာဆိုသည်မှာ… ကဗျာ ဖြစ်နေဖို့က အဓိက… မဟုတ်လား။
Jul 04- 2016
ဂျစ်စူ says: ကဗျာ အတတ်သင် သင်တန်း ဖွင့်စားရင် နံမယ်ကျီးလိမ့်မယ် အုစ်
Thint Aye Yeik says: ”ကဗျာ”ချည်းးးး ထိုင် သင်နေလို့ ဒီကဗျာဆရာတော်ကို ဝိုင်း ရိုက်ကြမယ်ထင့်
တောတွင်းပျော် says: ရေးထားတဲ့စာလုံးနီနဲ့ ကဗျာက လှတယ် မဝေဖန်တတ်ပါဘူးဗျာ ..
ခံစားရင် ခံစားရသလို ရေးချလိုက်တာပဲ
Thint Aye Yeik says: .ရေးတတ်ပါဘူးဗျာာာ
ခံစားမိရင် ခံစားမိသလို ပြောချပလိုက်တာပဲ
ဦးကြောင်ကြီး says: အလွမ်းsex
Thint Aye Yeik says: Sex မလွမ်း
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကဗျာဆိုတာ စကားလုံးလေးတွေ ပန်းပွင့်ဖြစ်သွားအောင် လုပ်တာ။ ဒါက တစ်မျိုး။ တခြား နည်းတွေလည်း ရှိပေါ့။ အသံသာတာဟာလည်း ကဗျာ။ အသံမသာတာဟာလည်း ကဗျာ။ ကဗျာ ဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင် ထိခတ်မှုတွေမှာ ရှိတယ်။
Thint Aye Yeik says: စကားလုံးတွေကို ပန်းပွင့်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းထက် ပိုလှတဲ့နည်းတစ်ခု ကျနော့်မှာ ရှိတယ်။
ပန်းပွင့်ရဲ့ပွင့်ဖက်ကလေးနဲ့ သနပ်ခါးရနံ့အဆင်းလေး ထိခတ်သွားတဲ့အသံ
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ဟန်တစ်ခွဲသားရယ်နဲ့
“ကဗျာ”ပါတဲ့ဗျို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Thint Aye Yeik says: .တွေ့ပြီ
မမချွိ says: ဒီ ရက်ထဲမှာ စိတ်ထဲ ပေါက်ကွဲနေတာ
ခါတိုင်းဆို စာကြောင်းတွေ ထွက်လာတယ်။
ခု တစ်ခေါက် မထွက်လာဘူးး
Thint Aye Yeik says: ခုရက်ထဲကျတော့ စိတ်ရှိလက်ရှိ ပေါက်ကွဲပြီး
ဝက်သားဒုတ်ထိုးတွေ စားချပလိုက်တယ် ဆိုပါတော့
မမချွိ says: အဲဒီ အတိုင်း ကွက်စတိပဲ။